Warar sheegaya afhayeenkii Al-shabaab Abuu Muscab in lagu dilay duqeyn ka dhacday J/dhexe – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Warar sheegaya afhayeenkii Al-shabaab Abuu Muscab in lagu dilay duqeyn ka dhacday J/dhexe
Wakaaladda wararka Shiinaha Xinhua ayaa baahisay in laba weerar oo qorsheysan oo ay qaadeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kumaandooska Soomaaliya lagu dilay saraakiil sare oo ka tirsan Xarakada Al-shabaab.
Weeraradaasi ayaa sida la sheegay ka dhacay degmada Saakow ee gobolka J/dhexe, waxaana ay kala dhaceen taariikhda markii ay kala ahayd 10-ka iyo 13-ka bishaan August.
Labadaasi weerar ayaa la sheegay in lagu dilay ilaa 30 ka tirsan Xarakada Al-shabaab, islamarkaana ay ku jiraan saraakiil sare oo uu ka mid yahay afhayeenkii howlgalada Al-shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab iyo sarkaal sare oo magaciisa lagu soo koobay Abuu Cumar.
Dhinaca kale, xogta weerarkaan oo ilaa iyo haatan aan si rasmi ah loo xaqiijin ayaa ah mid iska soo daba dhaceeysa, waxaana la sheegayaa Amiirka Al-shabaab Axmed Diiriye oo loo yaqaano Abuu Cubeyda in weerarkaasi lagu qabtay ama lagu dilay.
Si kastaba ha ahaatee, ma jirto warar kale oo madax banaan oo si rasmi ah u xaqiijinaya weerarkaan lagu dilay saraakiishaasi sare ee Xarakada Al-shabaab, sidoo kale ma jirto war kasoo baxay saraakiisha kale ee Al-shabaab oo warkaan ay beeninayaan ama ku rumeynayaan.
Halkaan ka aqriso wakaalada wararka Shiinaha XINHUA oo warkaan qortay